I-Fashion Fashion yoBafazi 2013
Imfashini Iindaba zeFestile
Njengazo naziphi na ezinye izikhokelo, imfashishini yabasetyhini abasomashishini bayamangaliswa ngamacebo angumqambi. Ngoko ke, ibhinqa elisemsebenzini kakhulu limele lijongisise ngenyameko imimiselo yakutshanje kwindlela yezoshishino kwaye ukusuka kwonyaka ukuya kwixesha ukuhlaziywa ikhabethe yakho.
I-Fashion Fashion 2013 iyigqirha epheleleyo yesikimu sombala obomvu-omhlophe kunye neengubo eziqhelekileyo. IFebhuwari 2013 ikuvumela ukuba udibanise ishishini kunye nesitayela esingaqhelekanga. Abaqulunqi banikezela abafazi beshishini ukuba banciphise imifanekiso yabo ngemibala efudumele kunye neendwangu zentambo.
Kwabathanda iimpahla, abacwangcisi bacebisa ukuba banake ingqalelo kwiingubo ezenziwe ngeesitiketi kunye nezikhwama zebhulukhwe kunye neebhatyi. Kwakhona kudlalwa yi-satin kunye nezinto ezivuthayo.
Abasetyhini abakhetha iidrobhebhethi ezahlukeneyo mabayeke ngeengubo ngeenqwelwe ezigqithisiweyo, imodeli eneemfestile, iingubo ezinqamlekileyo kunye neebhondi zokukhanya.
Nangona kunjalo, iyona ndlela eyona nto iphambili yendlela yokushishina ibhinqa yabasetyhini ngo-2013 yaba yingubo. Iindidi zeemodeli kunye nezinto eziza kubakhokelela nakwiyindoda enzima kakhulu kwaye ixakekile ukuba ihlehlise ibhizinesi lakhe ixesha elithile ngokuthanda ukuthenga.
Amalungu omthetho wee-Fashion 2013 aphakamisa ukuphucula isitayela sezoshishino ngoncedo lweenqabileyo ezintle kunye nentambo yenqabunga , amabhande okuqala kunye namabhande, kunye nezesebenzi eziphathekayo.
Ifashishini yoShishino lwaBasetyhini abapheleleyo
Abafazi bezoshishino abanamafomu anesitopu aziyi kunzima ukuthabatha ikhabethe ngo-2013, eya kuhambelana neendlela zakutshanje zakutshanje. I-Fashion Fashion 2013 inikezela abafazi abagciniweyo abafana neebhatyi, izambatho, iingubo kunye neentliziyo. Kwixesha elifudumalayo, abafazi beemigangatho emikhulu baya kukwazi ukufumana iimpahla zokuzikhethela. Ngexesha elitsha, abaqulunqi abacebisi batyhini abagciniweyo ukuba banxibe i-trouser okanye i-skirt suit.
Cardigans Knitted 2013
Izicathulo zasebusuku 2014
I-Flip-flops kwiqonga lika-2013
Izambatho zomtshato ezinzima zika-2015
Izambatho - ubusika 2016-2017
Iingubo zokugqwesa ukuphumelela ngo-2015
Izambatho ezigqibeleleyo zokugqiba i-2014
Iindwendwe zentambo zowesifazane
Imvula yamanzi - entwasahlobo 2015
Ziziphi iibhatyi ezantsi ezifashini ebusika 2015-2016
Amaphuzu Prada 2014
I-Mitral valve defect
Ukuqokelela i-Nelva Autumn-Winter i-2016-2017
Kutheni uphupha umsila?
Ukupheka njani ama-mushroom?
Ingubo yomnyama emnyama - nento enxibayo kunye nendlela yokwenza umfanekiso othembisayo?
Ngaba abafazi abakhulelweyo bangaba babhaptizwe?
Ukuhlanjululwa kweKrisimesi ngokukhulelwa
Izambatho zokugqoka zesolika
Isinkwa se Rye
I-Gooseberries - izinambuzane kunye nokulawula kwazo
IiJebhu ezinde zaBasetyhini
Ngaba kuncedo ukugwinya isidoda?
Imizobo kwikhekhe lomtshato
Yintoni enxiba izicathulo eziluhlaza?
Isangqa - Italy 2014
I-Arthroscopy yamadolo - kunye nonke into ofuna ukuyiqonda malunga nenkqubo kunye nokubuyiselwa
Inja yaseRashiya yaseRussia
I-Recipe ye-lamb-kebab kwi-grill